Izithakazelo izakhamuzi emafulethini kukhona izinkampani ukuphathwa noma abanikazi bayo. Prakthiza libonisa ukuthi akukhona njalo nezibopho zabo ziyafezwa ngokugcwele. Abanikazi efulethini kudingeka sicacise ukuthi hlobo luni likhona okusetshenzelwa izakhiwo, esikhundleni Hoo wokufika futhi kuphi isikhalazo inkampani ukuphathwa endabeni ethile.
Kufanele aphendule ngalokho inkampani ukuphathwa
Kuyinto ngokuyinhloko anakekela efanele yendlu, noma kunalokho, konke ngaphandle kwe-efulethini: emnyango, izindonga, ophahleni, endaweni, ezindlini. Ukuziphatha Criminal Code kuhlanganisa isimo zonke izindlela zokuxhumana - amanzi, igesi nogesi. Nge yini ngaphakathi efulethini, isimo iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho: ukuxhumana ezivamile - amapayipi, amanzi nokushisa eyodwa - kufanele zifakwe amasevisi, nezinye ukusatshalaliswa ngaphakathi - inkinga ezingeni lekuphila kahle. Ngokuvamile kunzima ukuqonda butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela amazwi okungokwakho lapho, futhi yiziphi abantu abangaphili ngezimiso, abahlinzeki besevisi. Ngaphezu izindaba kamasipala, inkampani ukuphathwa noma HOA enquma esemthethweni: uxhumano emthethweni nokusetshenziswa kwamandla, kabi insimu egcekeni bese ezindaweni zokungena, ukukhangisa kwi ezindongeni zendlu ngaphandle kwemvume, nokunye. Uma abaqashi ungazizwa iqhaza izikhulu eziphezulu ekuvikelweni kwamalungelo abo, anesizathu esizwakalayo emhlanganweni jikelele ukukhulisa sihilela indaba yokuthi ubani kokukhononda ukuba inkampani ukuphathwa. Ukugada imisebenzi Criminal Code
The main umzimba asimeme - izindlu wokuhlola isimo ngesikhathi uhulumeni wendawo kanye zezinkonzo kwezindlu kanye nezinsiza zomphakathi. Ngakho lapho kuphakama umbuzo khona sikhalo sakho ku inkampani ukuphathwa, ikheli lokuqala. Isikhalazo kufanele kwenziwe emhlanganweni ojwayelekile futhi wasayinwa abaqashi endlini. Nokho, isicelo kuhlolwa futhi balahlekelwa ilungelo oyedwa ekhononda izenzo ezingekho emthethweni inkampani inkonzo, noma kunjalo, ukuhlukumeza kufanele ihlolwe yiKhomishana. Lapho isiqinisekiso ukwephulwa kuya Criminal Code noma HOA kungenzeka unswinyo isicelo, kuze kufinyelele bokuhlukaniswa yonke imibuso. Ngokwesibonelo, uma abaqashi ungalindi usizo futhi wanquma esiphathelene nenkinga yabo siqu - esikhundleni amapayipi, balungisa nophahla, wangaphambili, nokunye - bangathembela phezu zokubala kabusha ngokugcwele uma ukhokha intela, Tinsita. Lokhu zikwenze uzitshele ukuthi wagcina onke namarisidi kanye nama-invoyisi umsebenzi.
Kuphi kuMlawuli ehhovisi izindlu okweqa payment for services Umbuso
Isikhathi esining impela ungezwa ukuthi izibalo ekulandiseni ezibalulekile emphakathini washintsha ngendlela engaqondakali, kuhlanganise izinkonzo eziningi ubuningi. Abaningi bamane umoya futhi pay amahlumela ngaphandle kokukhuluma. Abanye ozama ukuthola ukuthi ncamashi basuke overpaid, futhi baqala ukubheka, khona sikhalo sakho ku-nkampani zokulawula ukwanda emthethweni kwentengo. Kulokhu, ukubhekana izenzo izikhulu HCS intando umshushisi. Sekuvele kukhona udaba okusobala kwezinto non-ukuhambisana nemithetho. Kuye esigabeni ukwephulwa - kungokwalabo emkhakheni amalungelo umthengi, ukwephula ukuphepha umlilo, amanzi kanye energy imali, nokunye - kunezinyathelo eziningana izakhiwo, khona sikhalo sakho ku inkampani ukuphathwa. Lokhu kungaba amaphoyisa, Ministry of Izimo eziphuthumayo, Rospotrebnadzor, Gorvodokanal, ukushisa, nokunye. Ikheli lokuqala, njengoba kuye kwashiwo - kuba ukuhlolwa izindlu.
Umthetho ezimele kanye nekahulumeni
Customs omele - umuntu wezomthetho bhalisiwe e kwelinye lamazwe - kubahlanganyeli Customs Union. I Customs Ikhodi Customs Union
Tayger Vuds - the wegalofu engcono emhlabeni
Rustam Habil - Russian okuxubile karate fighter